मनमा जस्तो तरंग हुन्छ, मस्तिष्कले त्यसरी नै काम गर्छ - Nepal Sanchar
काठमाडौं, २६ कात्तिक । मानवजातिको सभ्यताको सुरुआतदेखि नै अर्थात् सनातन वैदिक कालदेखि नै जब मानिसले इनोभेसन गर्दै गयो, मानिसले खोज गर्दै गयो, त्यस क्रममा जीवन के हो? जगत के हो ? म को हुँ, कहाँबाट आएँ? किन छु? कहाँ जान्छु? समग्रमा मेरो वास्तविक अस्तित्व के हो? आदि जिज्ञासाहरू आए।